Dharka caadiga ah ee Ecuador, sidee u labbisan yihiin? | Wararka Safarka
Dharka caadiga ah ee ecuador
Maria Jose Roldan | | America, dhaqanka, Meelaha Dalxiiska loo tago, Ecuador
Ecuador waa wadan ku yaal gobolka Andean, waxay hoy u tahay dhaqan iyo caado dhaqameed, taas oo waliba ku dambayn doonta inay ka muuqato dharka caadiga ah ee wali ka jira magaalooyin dhowr ah. Ma ogtahay waxa ka dharka caadiga ah ee Ecuador?
Haddii noocyada badan ee caadiga ah dharka Ecuadorian dib loo eego, laga yaabee kiiska dharka caadiga ah ee gobolka Otavalos Waxaa la arkaa isticmaalka buste buluug ah oo ballaadhan oo jidhka daboolaya oo lagu hayo dhexda dhexda lagu xidho, marka laga reebo agabyada sida silsilado dahab ah iyo jijimooyin. Timaha sidoo kale marwalba sifiican ayey isugu xiran yihiin sameynta dabada.
Gobolka Andean ee Saraguro waxaan awoodi doonaa inaan helno isticmaalka ponchos, oo guud ahaan leh codad mugdi ah oo leh mudnaan madow, calaamadda awoodda, taas oo ka soo horjeedda isticmaalka koofiyadaha cad iyo xargaha maqaarka waaweyn.
Aagga hawdka ee Ecuador waxaad ka heli kartaa isku ekaysiin weyn iyo waxa ku yaal dhinaca kale ee xadka la leh Peru, halkaas oo aad ku arki karto joogitaanka silsilado midab leh oo mahad leh isticmaalka baalashaIntaas waxaa sii dheer, waxaad caadi ahaan arkeysaa marada ama dharka oo faahfaahintooda guud ay ku jirto sawirada lagu sameeyay.
Laakiin, miyaad dooneysaa inaad waxbadan ka ogaato dharka caadiga ah ee Ecuador? Ha lumin faahfaahin!
1 Dharka caadiga ah ee Ecuador ayaa ka badan kuwa soojireenka ah
1.1 Hababka kala duwan ee dhaqamada kala duwan
1.2 Haweenka tuulooyinka siira
1.3 Qabiilooyinka kaymaha roobka kulaylaha ee Ecuadorian Amazon
1.4 Magaalada Xeebta
1.5 Dadka Montubio
2 Sida loo labisto haddii aad tagto Ecuador
3 Sida loo xidho dharka rasmiga ah ee Ecuador
3.1 Hadaad nin tahay
3.2 Hadaad naag tahay
4 Sida loogu labisto dharka aan caadiga ahayn ee Ecuador
Dharka caadiga ah ee Ecuador ayaa ka badan kuwa soojireenka ah
Hababka kala duwan ee dhaqamada kala duwan
Dharka caadiga ah ee caadiga ah ee reer Ecuador ayaa wali caan ku ah bulshada Ecuador, runtiina waxaa jira kooxo qowmiyado qaarkood oo weli iibsada oo iibiya dharka dhaqameed si ay si joogto ah u xidhaan. Dhinaca kale, waxaa jira dhaqammo ay ka mid yihiin "colorados" Santo Domingo oo gebi ahaanba lumisay dharkoodii caadiga ahaa., iyo dharka gobolka waxaa loo arkaa oo kaliya soojiidasho dalxiis. Ecuador waxay ka kooban tahay qowmiyado badan oo leh dhaqamo iyo dhaqamo kala duwan, sidaa darteed ma jiro dhar u gaar ah oo u gaar ah Ecuador.
Tusaale ahaan, dharka dhaqameed ee gobolka Otavalos ayaa laga yaabaa inuu yahay midka ugu caansan uguna badan ee Ecuador. Bulshooyin dhowr ah oo buuraha ku yaal waxay ku hayaan dhaqammo badan dharkooda caadiga ah, sida koofiyadaha kala geddisan, ponchos ama buluugyo la isku qurxiyay oo badanaa ay adeegsadaan dad badan oo reer Ecuador ah.
Haweenka tuulooyinka siira
Haweenka ka kala yimid magaalooyinka kala geddisan ee Sierra Leone waxay soo xirtaan goonno jilicsan oo midabbo dhalaalaya leh oo lagu xardhay meelaha dhaadheer. Laakiin bulshooyinka, oo aad uga duwan, waxay yeelan karaan kala duwanaansho u gaar ah dharka ama koofiyadaha. Dumarku badanaa waxay xirtaan shaal dhogor ah oo ka samaysan alaab ay wax ku iibsadaan ama ay dhallaanka dhabarka ugu qaadaan.
Qabiilooyinka kaymaha roobka kulaylaha ee Ecuadorian Amazon
Qabiilooyin kala duwan oo ka soo jeeda kaymaha roobka kuleylaha ee Ecuadorian Amazon wali waxay xirtaan madax-dhaqameedyo baalal dhaqameed leh iyo agabyo kale oo wata macno qowmiyadeed ama qabyaalad. In kasta oo xubno badan oo da 'yar oo ka mid ah qabiilooyinkan ay isku dari karaan ama ku beddeli karaan qalabkan dharka ah kuwo kale oo leh qaab reer galbeed ah.
Magaalada Xeebta waxay u dhaxeysaa buuraha iyo badda, waxaa ka lumay dhaqamo iyo dhaqamo badan oo soo jireen ah. Dharkooda dhaqameed kiisaska badankood aad ugama duwana dharka dadka ka soo jeeda bada. In kasta oo xeebta ay jiraan beelo aan haysan dhar dhaqameed.
Magaalada Montubio (waxay ka kooban tahay gobollada Manabí, Los Ríos, Guayas iyo Santa Elena) waxay u taagan yihiin koofiyadooda (qaabka lo'da) iyo badanaa waxay sitaan baangadoWaxay xidhaan kabo caag ah laakiin ma haystaan ​​dhar dhaqameed la xidhiidha iyaga.
Laakiin maadaama ay jiraan bulshooyin badan oo kala duwan, ma jiro dhar dhaqameed caadi ah oo ka kooban dhammaan Ecuador.
Sida loo labisto haddii aad tagto Ecuador
Dharka gaarka ah ee reer Ecuador ayaa badanaa tilmaame u ah gobolka ay ka yimaadeen. Tusaale ahaan, ragga xiran ponchos buluug ah, surwaal dherer dherer ah, iyo koofiyado waxay u badan tahay inay ka imaan doonaan aagga Quito.. Tusaale kale waa dumarka reer Andes oo inta badan xirta blouses cad, shaal midab leh iyo koofiyado dahab ah iyo jijimooyin casaan ah. Soo-booqdayaasha u safraya Ecuador dalxiis ahaan looma rajeynayo inay xirtaan dharkaan dhaqameed, laakiin waad awoodi kartaa. Haddii aad go'aansato inaad u labisto sida ay u dhaqmaan, waxaa laguguula dhaqmi doonaa sidii qof muhiim ah adiga oo qiimo siinaya dharka noocan ah.
Sida loo xidho dharka rasmiga ah ee Ecuador
Si aad si rasmi ah ugu lebisato Ecuador iyo inaad u bixi karto sida ay tahay dharka dalka waxaad raaci kartaa talooyinka soo socda:
Hadaad nin tahay
Xidho suud madow oo ku xidhnow shirarka ganacsiga.
Xidho surwaal iyo xiriiro haddii aad ka shaqeyn doontid shirkad Ecuador ah.
Xidho funaanado isku dhafan oo iska ilaali koofiyadaha maqaayadaha ama guryaha qoysaska.
Hadaad naag tahay
Xidho goonno, sharaabaadyo iyo cidhib dhaadheer oo ay weheliso goonno ama surwaal waana inaad ka soo qaybgashaa kulan ganacsi ama shaqo
Dharka waa inuu noqdaa mid muxaafid ah sidaa darteed ma noqon karo mid aad u adag ama goyn kara. Goonooyinka ma noqon karaan kuwo gaagaaban ama soo jeedin ah.
Waad xiran kartaa dhar khafiif ah, goonno, ama surwaal si aad wax uga soo cunto ama ugu booqato qof guriga jooga. Dharka is biirsaday sidoo kale waxay u shaqeeyaan dhacdooyinka rasmiga ah, in kasta oo dharka hooseeya lagu yaqyaqsado.
Sida loogu labisto dharka aan caadiga ahayn ee Ecuador
Si aad u labisato dhar caadi ah, ragga iyo dumarka labadaba waa inay xiraan kabo isboorti, dharka isboortiga, kabaha socodka ... tan toddobaadkan waa fiicantahay. Waxay sidoo kale xiran karaan dhididka ama dhididka maalmaha fasaxa.
Fikrad kale ayaa ah in la xidho jiinis raaxo leh, shaati, ama goonno si ay u booqdaan goobaha dadweynaha. Dharka dabbaasha ee muxaafidka ah, gaagaaban iyo flop-flops waa in lagu xidho xeebta iyo barkadda.
Kuwani waa tusaalooyin yar oo ka mid ah dharka caadiga ah ee Ecuador iyo dharka caadiga ah ee caadiga ah ee ay wanaagsan tahay inaad ogtahay haddii aad rabto inaad u safarto Ecuador oo aad u labisto hadba meesha. In kastoo aan kugula taliyo inaad nafsadaada u sheegto iyadoo kuxiran aaga aad rabto inaad aado si aad u ogaato nooca dharka caadiga ah waa midka ay caadiyan xirtaan sidaa darteedna ma ahan mid jabaq ah hadaad rabto inaad dhar uhesho sida caadadooda tahay
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka Safarka » General » dhaqanka » Dharka caadiga ah ee ecuador
Sida laga soo xigtay Patricia Lurssen, sawirka ragga dhallin-yarada ah ee ku labisan surwaalka casaanka ah waa midka ay adeegsadaan ragga qaybta Huehuetenango ee Guatemala. Ka taxaddar sawirada maxaa yeelay waxay abuuraan jahwareer.
Jawaab Isabel Sisimit Esquit
8 meelood oo adduunka laga mamnuucay dumarka
Goorma ayey ka jaban tahay booqashada xeebaha adduunka ugu fiican?